ဂီတကိုခံစားရန်ပွဲတော် ၅ ခု | Bezzia
တိုက်ရိုက်ဂီတကိုခံစားရန်ပွဲတော် ၅ ခု
မာရီယာ vazquez | | ယဉျကြေးမှု, ဖြစ်ရပ်များ
ငါတို့တွေအများကြီးရှိတယ် ကျွန်တော်တို့အားလပ်ရက်တွေမှာပျော်ခဲ့တယ် ဇူလိုင်လအတွင်းဤလအတွင်း၊ ကျွန်တော်တို့ထဲကတချို့ဟာတကယ်တော့စတော့မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကြီးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်လှုပ်ရှားမှုများမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်အိမ်မှမထွက်ဘဲတုန်ခါနေသည့်ပြပွဲတစ်လဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ၏လအတွင်းအချို့ လူကြိုက်အများဆုံးပွဲတော်များ။ ဂီတအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုဇာတ်ကောင်များအနေနှင့်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်ပျော်မွေ့နိုင်သောပွဲတော်များ။ Botanical Nights, Letur Alma (သို့မဟုတ်) Arenal Souln တို့သည်ယခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်များကိုဂီတနှင့်ပြည့်စေမည့်ပွဲတော်များမှအချို့သာဖြစ်သည်။
1 ရုက္ခဗေဒည (မက်ဒရစ်)
3 တေးသီချင်း (ကာတဂါဂျင်)
4 ဘီစကေးပင်လယ်အော်ပွဲတော် (ဘာမeo)
5 Arenal အသံ (Burriana)
ရုက္ခဗေဒညဖြစ်ပါတယ် ဖျော်ဖြေပွဲသံသရာ မြို့တော်အတွက်နွေရာသီမှတ်တိုင်။ နွေရာသီရာသီအလယ်၌ဂီတပရိသတ်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ မက်ဒရစ်မြို့ရှိ Complutense တက္ကသိုလ်ရှိရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ရှိ Alfonso XIII တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲတော်သည်စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်အထိသင်သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးအမျိုးစုံသောအစီအစဉ်ကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲများ၏ည 30 ကျော်ကျော်။ အတည်ပြုထားသောအနုပညာရှင်များ၏ရှည်လျားသောစာရင်းထဲတွင် Madness၊ Ben Harper၊ The Waterboys၊ Woody Allen၊ နိုင်ငံတကာနာမည်များဖြစ်သော Eddy Davis New Orleans ဂျက်ဇ်ဂီတအဖွဲ့၊ Daryl Hall နှင့် John Oates၊ Macy Grey, Beirut, The Chieftains, Michael Bolton သို့မဟုတ် Chick တို့ပါဝင်သည် Corea ထွက်မတ်တပ်ရပ်။ စပိန်စကားပြောသောကမ္ဘာကိုလည်း Juanes, Ana Belén၊ Diego El Cigala, Niña Pastori, Andrés Calamaro, Iván Ferreiro၊
မင်းဝယ်နိုင်တယ် ယူရို ၃၀ ကနေလက်မှတ်တွေ အတွက်အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲ၏အသီးအသီးအဘို့ ပွဲတော် website။ တချို့ကိုရောင်းပြီးသားဖြစ်လို့သင်အကြိုက်ဆုံးပန်းချီဆရာကိုမတွေ့မြင်လိုလျှင်မြန်မြန်လုပ်ပါ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ Letur (Albacete) သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးထွားလာသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စတုတ္ထမြောက်ကျင်းပသည့် LeturAlma ပွဲတော်ကိုကျင်းပလိမ့်မည် ကျေးလက်ဒေသလူ ဦး ရေဆန့်ကျင်သတင်းစကား။ Rozalénမှမြှင့်တင်ပေးသောပွဲသည်မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်အဆုံးမဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သင်တန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ Rozalénကိုယ်တိုင်ပွဲတော်တွင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ပြီး La Pegatina၊ Kiko Veneno၊ Carmen Boza, Arco, Guateque Sónico, Takones Rumberos Social Club, Felices las Cuatro, Julia Martínezနှင့် Carletti Porta တို့ပါ ၀ င်မည်။
ဤပွဲတော်အတွက်သင်၏လက်မှတ်ကိုသင်ဝယ်ယူရန်အချိန်ရှိသေးသည်။ ပွဲအတွက်ဖျော်ဖြေပွဲအားလုံးကိုခံစားရင်းတစ်နေ့လျှင်လက်မှတ်များသည်ယူရို ၂၅ ကျသင့်သည် သင့်ကိုယူရို ၃၄ ကျသင့်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စပိန်ရှိအခြားနေရာများမှလာလျှင်စခန်းချနေရာမှမြေကွက်တစ်ခုကိုငှားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ပွဲတော်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ပေါ်တူဂီ the ည့်သည်နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိကျင်းပမည့် La Mar de Músicas၏ ၂၅ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေမှု။ ပွဲတော်အဖွဲ့အစည်းသည်ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ အနုပညာနှင့်စာပေအထူးများကို Cartagena အားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှပြုလုပ်သောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာများသို့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပွဲတော်၏ဂီတအစီအစဉ်ကို Elza Soares၊ Mon Laferte, Mayra Andrade, Marlon Williams, Pongo, Ólafur Arnalds, Orquesta Akokán, Conan Osíris, Luisa Sobral, Trending Tropics သို့မဟုတ် Kamasai Washington စသည့်အနုပညာရှင်များက ဦး ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ အမျိုးသားရေးအပိုင်းရှိလိမ့်မည် Likina vlvarez၊ Los Hermanos Cubero၊ Kiki Morente၊ Estrella Morente၊ Solá Morente, Niño de Elche၊ SílviaPérez Cruz, Raül Refree နှင့် Javier Colina စသည့်အနုပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သင်အကြားရွေးချယ်နိုင်သည် လက်မှတ်များဝယ်သည် သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်သို့မဟုတ်သူတို့ကျင်းပမည့်နေရာများအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ယူသောဖျော်ဖြေပွဲများသာဖြစ်သည် - CIM အဟောင်းသို့မဟုတ်ပါကေးတောရက်စ်၏ခန်းမ။
Mundaka ပွဲတော်သည် Bay of Biscay Festival သို့ ပြောင်းလဲ၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ခံရန်နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရောဂျက်ကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရက်ချိန်းသည်ရက်များတွင်ဖြစ်လိမ့်မည် ဇူလိုင်လ 26, 27 နှင့် 28 တက်ရောက်သူများတက်ရောက်ကြသည့်ကမ်းရိုးတန်းမြူနီစီပယ်ဘာမြိုယိုမြို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ကားတစ်စီးကိုအသုံးမပြုဘဲပတ် ၀ န်းကျင်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
Rufus Wainwright၊ Caravan Palace၊ Backyard Babies၊ Fuel Fandango, Mon Laferte, Tarque, elngel Stanich, Sex Museum၊ The Bronson နှင့် The Mani-Las တို့သည်အနုပညာရှင်များ၏ဖျော်ဖြေမှုတွင်ပါဝင်သည်။ အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာမူဘောင်။ အနုပညာလက်ရာများဖြစ်သော Anita Parker၊ James Room & Weird Antiqua, Dekot နှင့် Zona Cero စသည့်အနုပညာရှင်များနှင့်အတူ Basque အဘိဓါန်၏မြင်ကွင်းကိုမြင်နိုင်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်ဗြိတိသျှ Crystal Fighters၊ Wave Rave နှင့်အတူ Hinds, Belako နှင့်Niña Coyote နှင့် Chico Tornado တို့နှင့်အတူဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရန်မမေ့နိုင်သောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ DJ စုံကမ်းလှမ်း။
ထဲမှာ ပွဲတော်ဝက်ဘ်ဆိုက် သင်၏နေရာကိုစခန်းချရန်ဘီလ်ဘာအိုမှဘတ်စကားလက်မှတ်များမှသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့လက်မှတ်လည်း ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်ငှားရမ်းခကိုယူရို (၄၀) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ် ဓာတ်မြေသြဇာ အပြည့်အဝသင်တန်းများ€ 70 နှင့်€ 100 အကြားအထိ။
Arenal အသံ (Burriana)
Arenal Sound သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေရန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည် ကမ်းခြေချစ်သူများ၎င်း၏ဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့, နေနှင့်အကောင်းဆုံးဂီတ။ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်မှသြဂုတ်လ ၄ ရက်အထိပုံမှန်ကျင်းပမည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဖြစ်သည့် El Arenal de Burriana ကမ်းခြေ။
Dorian, Old Morla, Mars၊ တိရစ္ဆာန်ရုံ၊ Martin Garrix, Don Diablo, Farruko, Karol G, Oliver Heldens, C. Tangana, Morat, Fangoria, Beret, Dani Fernández, Mienen, King Jedet, Les Castizos၊ အချိန်, သူတို့ကပဲအတည်ပြုအနုပညာရှင်အချို့ဖြစ်ကြသည်။
Arenal Sound 2019 လက်မှတ်အားလုံးသည် ၂၄ နာရီမပြည့်သောရောင်းအားဖြစ်သည်။ နွေရာသီ၏လူကြိုက်အများဆုံးပွဲတော်များသံသယမရှိဘဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကရောင်းဖို့နေဆဲဖြစ်သည် နေ့ကလက်မှတ်တွေ အတွက်€ 55 ကနေ Arenal အသံကွန်ရက်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » ယဉျကြေးမှု » တိုက်ရိုက်ဂီတကိုခံစားရန်ပွဲတော် ၅ ခု
နာကျင်သောပြိုကွဲပြီးနောက်သင်၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါ